🥇 ▷ Skype waxay soo saartay muuqaalo cusub si ay ula tartanto WhatsApp iyo Google Duo ✅
Skype waxay soo saartay muuqaalo cusub si ay ula tartanto WhatsApp iyo Google Duo
Isticmaalayaasha badankood wali waxay dareemayaan inay tahay Skype sida inuu yahay app kaamil Samee wicitaano fiidiyow oo bilaash ah. Intaa waxaa dheer, dad badani waxay aaminsan yihiin in Skype Tan waxaa loo isticmaalay oo keliya ganacsiga isla markaana aragtidaas ayaa ka fog xaaladda hadda jirta. Skype Tani waxay horumarineysaa hadafkuna waa inuu la tartamo meelaha kale ee fariimaha loo diro sida Google Duo ama WhatsApp. Microsoft way ogtahay inaysan waayayn fursadda ay ku siinayaan aragti aragga mid ka mid ah iibsiyaasha ugu wanaagsan taariikhdeeda.
Is-qor si aad u hesho wararka ugu dambeeyay ee teknolojiyada santuuqaaga boostada. Waxaan kuu soo diri doonaa e-mayl casri ah oo ay ku jiraan soo koobid mowduucyo, khiyaamo, isbarbardhigyo iyo dib-u-eegis lagu dhajiyay bartayada internetka.
Adeegyada ay bixiyaan Mailchimp
Buuggiisa cusboonaysiinta ugu dambeysay, Skype Wuxuu ku daray dhowr waxyaabood oo cusub si uu uga dhigo tartan tayo leh oo ku saabsan codsigan noocan ah. Hada adeegsadayaasha way keydin karaan farriimaha qabyada ah, waxay ku diri karaan sawirro badan ama fiidiyoo isku isla boostada ah, dib u eegista faylasha warbaahinta iyo waxyaabo kale oo kala duwan
Skype sii wad cusbooneysiinta si loola tartamo WhatsApp
Muuqaaladan cusubi waxay wada gaadheen dhamaan dalabyada madal, labadaba qaab desktop (Windows iyo OS X) sida barnaamijka Skype. Kaliya kaliya lama qori karo, laakiin waa la badbaadin karaa calaamadee fariinta adoo gujinaya isla markaana taabanaya qoritaanka. Farriimahaan waxaa lagu keydinayaa galka cusub ee “Bookmark”.
Cusboonaysiinta ugu dambeysa sidoo kale waa macquul dir sawirro ama fiidyowyo hab ka fudud. Markaad rabto inaad u dirto sawirada qaar ama fiidiyowyo koox asxaab ah ama qoys qoys ah Skype waxay si otomaatig ah u habeyn doontaa gudaha albumka si aysan u jirin wax jabsi ah oo ku saabsan taxanaha wadahadalka kooxda. Xitaa waad ka dheehan kartaa sawirrada ama warbaahinta aad soo gudbisay, ma soo diri doonto faylal aan waxtar lahayn.
Wax cusub oo cusub oo ku soo kordha cusboonaysiintaan cusub waa adeegsiga. daaqad gooni ah Nooca desktop-ka ee Skype oo kuu oggolaanaya inaad kuxirnaato liiskaaga meesha lagaala xiriiro iyo wadahadallada oo gooni gooni ah, adigoo iska ilaalinaya jahwareerka marka aad isla xiriireysid xiriirada badan isla mar.
Sida dhammaan noocyada barnaamijyada farriimaha ee u guuraya aaladaha leh adeegsiga ka badan isticmaalka wicitaanka fiidiyaha, sidoo kale macno ayey leedahay. Skype Samee isbedeladan sida ugu dhaqsaha badan si aadan ugu dhicin tartan. Muuqaal cusub Hada waa la heli karaa nooca desktop-ka ee dalabka.
Warar kale oo ku saabsan… cusbooneysiinta, SkypeWhatsApp